भारतीय कलाकार: कसकाे सम्पति कति ? - Nepali Online News Media-shikharnews.com - shikharnews.com
भारतीय कलाकार: कसकाे सम्पति कति ?
फोर्ब्स इण्डिया म्यागेजिनले यस वर्षका सर्वाधिक धनी १०० जना भारतीय सेलिब्रेटीहरुको सूची सार्वजनिक गरेको छ । यो सूचीमा बलिउडका सलमान खान यस वर्षका सर्वाधिक धनी सेलिब्रेटी बनेका छन् । ५२ वर्षीया सलमान खानले यस वर्ष २५३.२५ करोड भारतीय रुपैयाँको कमाई गरेका छन् ।
सलमान खानले उनका यस वर्ष रिलिज भएका फिल्म ‘टाइगर जिन्दा हे’ र ‘रेस ३’ को बक्सअफिस कलेक्सनका साथै टेलिभिजन कार्यक्रम र एण्डोर्समेन्टका माध्यमबाट कमाई गरेका हुन् ।
यसै अनुसार सलमान खान लगातार ३ वर्षदेखि बलिउडका सबैभन्दा धनी अभिनेताको लिष्टमा पहिलो स्थानमा रहिरहेका छन् । यसका साथै दोस्रो स्थानमा क्रिकेटर विराट कोहली परेका छन् । विराट कोहलीको यस वर्षको कमाई २२८ करोड भारतीय रुपैयाँ रहेको छ ।
तेस्रो स्थानमा अभिनेता अक्षय कुमारको नाम रहेको छ । एक वर्षमै धेरै फिल्ममा काम गर्नै अक्षयले यस वर्ष १८५ करोड रुपैयाँ कमाएका छन् । गएको वर्षदेखि कुनैपनि फिल्ममा नदेखिएका अभिनेता शाहरुख खानको नाम भने १३औं स्थानमा परेको छ । शाहरुख खानको यस वर्षको कमाई ५६ करोड रहेको छ ।
सार्वाधिक धनी सेलिब्रेटीको लिष्टका आमिर खान छैठौं, अमिताभ बच्चन सातौं र अभिनेता रणवीर सिंह आठौं स्थानमा परेका छन । अभिनेत्रीहरुमध्ये दीपिका पादुकोण सर्वाधिक धनी
दीपिका र प्रियंकाले सँगसँगै हलिउड फिल्ममा पनि काम गरेकाले यि दुवैको तुलना भइरहन्छ । तर यस वर्ष भने दीपिकाले प्रियंकालाई पछि पारेकी छिन् । यस वर्ष प्रियंकाको कमाई जम्मा १८ करोड रहेको बताइएको छ भने उनी ४९औं स्थानमा परेकी छिन् । यस्तै यस लिष्टमा अभिनेत्री आलिया भट्ट, अनुष्का शर्मा, कट्रिना केफको नामसमेत रहेको छ ।